के सेक्स शारीरिक कसरत हो ? – rastriyakhabar.com
एजेन्सी । हाम्रो समाजमा अझैपनि सेक्सका बारेमा खुलेर कुरा गर्न सकिदैन् । तर, सत्य के हो भने नियमित सेक्स स्वस्थ स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण पाटो हो । सेक्सले ब्लड प्रेसर कम गर्छ र कोलस्ट्रोलमा पनि सुधार हुन्छ ।
सर्वेक्षणका अनुसार नियमित सेक्सले हर्टअट्याक अर्थात हृदयघात र स्ट्रोकको सम्भावनालाई ५० प्रतिशतले कम गर्छ । जो मानिस नियमित सेक्स गर्छन उनीहरु कम विरामी हुन्छन् । सर्वेक्षणका अनुसार नियमित सेक्स गर्दा मानिस शारीरिक रुपमा मात्रै नभई मानसिक रुपमा पनि स्वस्थ रहने उल्लेख छ ।
कति क्यालोरी बर्न गर्छ ?
एउटा जोडीको सेक्स ५.४ मिनेट देखि ९ मिनेटसम्म कायम रहन सक्छ। फोरप्ले सहित यो समय २० मिनेट वा त्यो भन्दा पनि लामो समयसम्म हुनसक्दछ। यो क्रममा कति क्यारोली बर्न हुन्छ त ? सन् २०१३ मा अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताले स्वस्थ जोडी सेक्स गर्दा खर्च हुने क्यालोरी मापन गरेका थिए। यसबाट थाहा भयो कि एउटा सामान्य सेक्सले शरीरमा ८५ क्यालोरी बर्न गर्छ। २०-२५ मिनेट सामान्य गतिमा दौडदाँ यति नै शक्ति खर्च हुन्छ। तर पक्का हो कि, दौडदाँको सन्तुष्टी र सेक्सको सन्तुष्टीमा भने आकास जमिनको फरक हुन्छ।
सेक्सले तपाइको पार्टनरलाई नजिक ल्याउँछ, अर्थात सम्बन्ध सुमधुर बनाउन मद्धत गर्छ। यसले गर्ने फाइदा यतिमा मात्र सिमित छैन। कार्डियोभास्कुलर रेस्पोस्ट सुधारेर मुटुलाइ फाइदा गर्छ, ब्लड प्रेसर कम गर्छ अनि रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँछ। शारीरिक मात्र होइन यसको मानसिक फाइदा पनि उति नै छ। सेक्सको क्रममा सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिने र अक्सिटोसिन जस्ता न्युरोट्रान्समिटरहरुको उत्पादनले मानसिक स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
महिलाहरुको ब्लाडर कन्ट्रोल गर्नमा मद्दत :
सेक्सलाई सबैभन्दा सजिलो घरभित्रै गर्न सकिने कसरत भन्न सकिन्छ। चाहे जस्तो मौसम होस् फरक पर्दैन। धेरै अनुसन्धानले देखाउँछ कि जिम गएर क्यालोरी बर्न गर्नु भन्दा सेक्स रोज्ने महिला तथा पुरुष अत्याधिक छन्।
सेक्सको बेफाइदा भनेको कसरत झै यो लामो समय टिकाउन सकिदैन। तर फोरप्लेको समय बढाएर यसको अवधि बढाउन सकिन्छ जसले धेरै क्यालोरी वर्न गर्न सकिन्छ।तर यसो भन्दैमा शारीरिक कसरतलाई सेक्सले रिप्लेस भने गर्न मिल्दैन।
पुरुषको शरीरले वीर्य उत्पादन गर्न सोचेभन्दा बढी शक्ति खर्च गर्छ। अत्याधिक वीर्य निस्काशन गर्नु अर्थात अधिक सेक्स गर्नु भनेको शरीरलाइ बढी भन्दा बढी भार पार्नु हो। यदि राम्रो खानापिना छैन र निस्काशन भएको वीर्य उत्पादन गर्न शरीरसंग आवश्यक शक्ति हुँदैन भने यसले थुप्रै शारीरक र मानसिक समस्या निम्त्याउँछ। त्यसैले यसबारेमा सचेत भएर स्वस्थ अनि सन्तुलिन सेक्स लाइफ कायम राख्नु पर्दछ।
सौन्दर्यकर्मी गोमा कार्की अन्तराष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित
राष्ट्रपतिद्वारा ६ वटा अध्यादेश जारी (सूची हेर्नुहाेस्)
विमानको ल्यान्डिङ गियरमा बसेर यी व्यक्तिले यात्रा पूरा गरे !
जापान र अष्ट्रेलिया बन्द, नेपाली विद्यार्थी प्रभावित
यी हुन् मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका पाँच निर्णय
सरोज सुबेदी इमर्जिंग अवार्डबाट सम्मानित
कुमार आचार्य डाइनामिक सोसियल अवार्डबाट सम्मानित
सुमन खनाल युवा व्यवसायी अवार्डबाट सम्मानित